OTU ESI EJI ONYE NTANETIRI CANON - ONYE NBIPUTA - 2019
Isi Onye nbiputa
Otu esi eji onye ntanetiri Canon
Google Chrome bu ihe a ma ama maka oru ya, nnukwu ulo oru, nkwado sitere n'aka Google na otutu ihe ndi ozo di iche iche nke mere ka eziokwu a bu ihe omuma ihe ntanetu a karia. O di nwute, obughi ndi oru nyocha nile na aru oru. Karịsịa, otu n'ime ihe nchọgharị nchọgharị na-amalite na "Oops ...".
"Opanki ..." na Google Chrome - ụdị njehie a na-ahụkarị, nke na-egosi na website ahụ ejighị. Ma, ihe mere na ebe nrụọrụ weebụ enweghị ike ịrụ ọrụ - ọtụtụ ihe kpatara ya nwere ike imetụta nke a. N'ọnọdụ ọ bụla, nwee nsogbu yiri nke ahụ, ị ​​ga-agbaso ndụmọdụ ole na ole dị mfe, akọwapụtara n'okpuru.
Esi kpochapụ njehie "Opanki ..." na Google Chrome?
Nzọụkwụ 1: Nwee ume Page
Nke mbụ, mgbe ị na-enwe mmejọ yiri nke ahụ, ị ​​ga-enyo enyo maka njedebe nke Chrome, nke, dị ka iwu, edozi site na ịmezi peeji ahụ. Ị nwere ike ịmeghachi ihu na ibe ahụ site na ịpị akara ngosi kwekọrọ na akụkụ aka ekpe nke elu ma ọ bụ site na ịpị igodo dị na keyboard F5.
Nzọụkwụ 2: ngọngọ mmechi na mmemme ndị na-adịghị mkpa na kọmpụta gị
Nke abụọ kachasị kpatara njehie ahụ bụ "Opanky ..." - enweghị RAM maka ezi ọrụ nke ihe nchọgharị ahụ. N'okwu a, ị ga-emechi ọnụ ọgụgụ kachasị nke taabụ na ihe nchọgharị ahụ n'onwe ya, na kọmpụta na-eme mmechi nke mmemme ndị na-adịghị mkpa bụ ndị anaghị eji ya n'oge ọrụ Google Chrome.
Usoro 3: Malitegharịa kọmputa ahụ
Ị ga-enyo enyo maka usoro ọdịda, nke, dịka iwu, edoziri site na ịmalitegharịa kọmputa. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ. "Malite", pịa akara ngosi dị na ala aka ekpe, wee họrọ Rụgharịa.
Usoro 4: Tinyegharịa Nchọgharị
Site na nke a, ụzọ ndị ọzọ dị egwu maka idozi nsogbu ahụ malitere, ọ bụkwa site na usoro a ka anyị na-enye gị ndụmọdụ ka ị rụgharịa ihe nchọgharị ahụ.
Mbụ, ị ga-ewepụ ihe nchọgharị ahụ na kọmputa. N'ezie, ịnwere ike ihichapụ ụzọ ụzọ ahụ site na menu "Ogwe njikwa" - "Wepụ Mmemme", ma ọ ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-enweta enyemaka nke software ndị ọkachamara iji wepụ ihe nchọgharị weebụ na kọmputa. Enwetala nkọwa banyere nke a na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Esi ewepụ kọmputa Google Chrome
Mgbe wepụ ihe nchọgharị ahụ zuru oke, ị ga-achọ ibudata Chrome kachasị ọhụrụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke onye mmepụta.
Download Google Chrome Nchọgharị
Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ nke onye mmepụta ihe, ị ga-achọ ijide n'aka na usoro ahụ na-enye gị nsonaazụ ziri ezi nke Google Chrome, bụ nke kwekọrọ na ngwà kọmputa gị na sistemụ arụmọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ọrụ nke Windows 64 na-eche eziokwu na usoro ahụ na-enye aka ibudata ngwugwu nkesa ihe nkedo 32, nke, na tiori, kwesịrị ịrụ ọrụ na kọmpụta, ma n'eziokwu niile na taabụ na njehie "Opany ...".
Ọ bụrụ na ị maghị bitiness (bit omimi) nke sistemụ arụ ọrụ gị, mepee menu "Ogwe njikwa"tinye na akuku aka nri "Obere Oyiyi"wee gaa mpaghara "Usoro".
Na window meghere n'akụkụ ihe ahụ "Ụdị usoro" Ị nwere ike ịhụ nhazi sistemụ ahụ (enwere naanị abụọ - 32 na 64 bit). Nke a na-aghaghị ime mgbe ị na-ebudata nchịkọta Google Chrome na kọmputa gị.
Mgbe ibudatara mbipụta ahụ achọrọ nke nkesa, na -eme usoro mmemme na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 5: Wepụ ihe mgbagwoju anya
Ụfọdụ mmemme nwere ike imegide Google Chrome, nyochaa ma mmejọ ahụ pụtara mgbe ị wụnye ihe ọ bụla na kọmputa gị. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ị wepu software ahụ na-emegiderịta site na kọmpụta wee regharịa sistemụ arụmọrụ.
Usoro 6: wepu nje
Ọ dịghị mkpa ka ịwepụ ihe omume nke ịrịa nje na kọmputa, ebe ọ bụ na ọtụtụ nje dị iche iche na-adabere kpọmkwem n'ịkụnye ihe nchọgharị ahụ.
N'okwu a, ọ ga-adị gị mkpa ịmepụta usoro nyocha iji antivirus gị ma ọ bụ ọrụ ịmepụta pụrụ iche. Dr.Web CureIt.
Wepu abamuru Dr.Web CureIt
Ọ bụrụ na nchoputa ahụ, achọpụtara egwu egwu kọmputa na kọmputa gị, ị ga-achọ iwepu ha, wee malitegharịa kọmputa ma chọpụta ọrụ nke ihe nchọgharị ahụ. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ adịghị arụ ọrụ, regharịa ya, n'ihi na nje ahụ nwere ike imebi ọrụ ya, n'ihi ya, ọbụna mgbe ọ wepụsịrị nje ahụ, nsogbu ahụ na ọrụ nke ihe nchọgharị ahụ nwere ike ịnọgide na-aba uru.
Usoro 7: Gbanyụọ Flash Player nkwụnye
Ọ bụrụ na njehie "Opany ..." na-egosi n'oge ịgba mbọ igwu ọdịnaya Flash na Google Chrome, ị kwesịrị iche ozugbo nsogbu dị na ọrụ Flash Player, nke a na-atụ aro ka enwee nkwarụ.
Iji mee nke a, ọ dị anyị mkpa ịbanye na ihe nchọgharị nke nchịkwa plugins site na ịpị njikọ njikọ:
Chọta Adobe Flash Player na ndepụta nke plugins arụnyere na pịa bọtịnụ na-esote nkwụnye a. "Gbanyụọ"site na ịsụgharị ya na-adịghị arụ ọrụ.
Anyị na-atụ anya na aro ndị a nyere gị aka dozie nsogbu ahụ na ọrụ Google Chrome nchọgharị. Ọ bụrụ na ị nwere ahụmahụ gị nke wepụ njehie ahụ "Opanki ...", kesaa ya na ihe ndị ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Onye nbiputa 2019